म कसरी एयर फ्रिर प्रयोग गर्छु - समाचार - चेन्हान
म कसरी एयर फ्रायर प्रयोग गर्दछु
फ्राइड खाना जीवनमा खाद्यान्नको एक सामान्य प्रकार हो, फ्राइड कुखुरा, फ्रेन्च फ्राइज, फ्राइड डल्फ स्टिकहरू र यस्तै, खानाको लागि, अधिक फोहोर, बढी क्यालोरी जति बढी खानको लागि। तर फ्राइड खाना अझै पनि धेरै अस्वास्थ्यकर आह हो, प्राय: खाइन्छ फ्राइड खानाले व्यक्तिलाई वृद्धावस्था, मोटापा, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल रोगहरू बढाउने र अन्य यस्तै बनाउन दिन्छ। त्यसोभए एयर फ्रायरको जन्म, साथीहरूलाई जसले फ्राइड खाना खान मन पराउँछन्, स्वाद र स्वास्थ्य सन्तुष्टि ल्याउँदछन्। भान्साको सामानको बिजुली उपकरणका रूपमा, यसको सुविधाजनक र सजीलोसँग कम बत्तीहरूका विशेषताहरूको उपभोक्ताहरूको ठूलो संख्याले स्वागत गर्दछ।
वास्तवमा, हावा फ्रियरको "फ्राई" "वास्तवमै फ्राइड गरिएको छैन, तर the°० डिग्री सर्पिल एयर हाई-स्पीड सर्कुलेशन टेक्नोलोजी अपनाउँछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो फ्रिरमा मूल तातो तेललाई हावामा प्रतिस्थापन गर्नु हो र सूर्यको तातो बतासको समान संवहन तापीकरण विधि प्रयोग गरी बन्द भाँडोमा तातो प्रवाहको द्रुत परिसंचरण बनाउँदछ, ताकि खाना पकाइन्छ। ।
त्यसोभए तपाईं कसरी एयर फ्रायर प्रयोग गर्नुहुन्छ?
वास्तवमा, मूर्ख मूर्ख उपकरणको रूपमा। एयर फ्रियर विशेष रूपले किचन newbies को लागी विकसित गरिएको थियो जसले राम्रो पकाउन सक्दैन। म विश्वास गर्छु कि धेरै साथीहरू जो खाना पकाउन राम्रो छैनन्, खाना पकाउनुको मुख्य कारण यो हो कि उनीहरूले तातो नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, तर एयर फ्रायरलाई त्यस्तो समस्या हुँदैन! अब एयर फ्रियर सामान्यतया अधिक बुद्धिमान छ, रोटरी वा टच प्रकार समय र तापमान नियन्त्रण बटन को उपयोग, तपाईं तापक्रम र समय सेटिंग्स समायोजित गर्न हृदय पालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर नुसार समय र तापक्रम सेट गर्नुपर्दछ र त्यसपछि तपाईं अन्य चीजहरू गर्न सक्नुहुनेछ, समय आउँदा मेशिनले स्वत: काट्छ। यस बाहेक, आन्तरिक थर्मोस्टेटिक नियन्त्रण, चक्रीय तताउने, अधिक समान तापक्रम वितरण, जलेकोमा चिन्ता नगर्नुहोस्। र केहि स्मार्ट एयर फ्रिरहरू पनि APPS संग सुसज्जित छन् जुन एक क्लिकको साथ गर्न सकिन्छ, यसलाई सुरू गर्न धेरै सजिलो बनाउँदै।
सारांशमा, धेरै एयर फ्रिरहरू छुट्याउन सकिने फ्राइ bas टोकरीहरूसँग डिजाइन गरिएको छ, जसले तेल फिल्टरि ofको प्रभाव प्राप्त गर्न फ्राइड तेललाई खानाबाट सीधै अलग गर्न सक्दछ। तपाईको हात जलाईको चिन्ता बिना खाना हटाउन बिस्तार थिच्नुहोस् र फ्रिरबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। भित्री प्यान सफा गर्न सजिलो छ र सम्पूर्ण पकाउने प्रक्रिया पर्याप्त सजिलो छ।
अघिल्लो:एयर फ्रियर रोस्ट टी-हड्डी पोर्क चप, सरल चरणहरू, अत्यन्त स्वादिष्ट सुपर खाना!